Favorite Favorite Favorite Kuenda kune vekuAmerica Zhizha Zvino Zvaratidzwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Favorite Favorite Favorite Kuenda kune vekuAmerica Zhizha Zvino Zvaratidzwa
Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Mushure memakore maviri akateedzana akaratidzwa nekukanganisa kwedenda reCovid-19 pakushanya, mupi wekubatanidza cellular, Ubigi, akafumura mafambiro epasirese panguva yezhizha.
Kunyanya, inoshuma nzvimbo dzinodiwa dzevashanyi dzeAmerica zvichienderana nekushandisa kwavo data muzhizha.
Ichi chidzidzo chepasi rose chakavakirwa pakuongorora kwekushandiswa kweSIM mobile data zvirongwa nemuenzaniso wevashandisi zviuru gumi.
Yakarongedzerwa mukati menguva pakati paChikunguru naNyamavhuvhu 2021 zvinoenderana nenyika yevashandisi yekugara.
Chekutanga, padanho repasi rose, kwakave nekukwira kwakanyanya mukushandiswa kwedata munguva yezhizha, sezvo zvirambidzo zvekufamba zvakasimudzwa munyika zhinji. Huwandu hwekutengesa kwezvirongwa zvedata zvakapetwa kaviri muna Chikunguru naNyamavhuvhu 2021 zvichienzaniswa naMay naChikumi 2021, uye zvakapetwa katatu (+ 246%) zvichienzaniswa nenguva imwe chete muna 2020.
Padanho renyika, MaAmerica vanga vari shasha dze eSIM kugamuchirwa, vachizviisa ivo sevashandisi vekutanga vezvirongwa zve data kunze uye kumba. Nei uye vakaenda kupi?
ZVINHU ZVIKURU ZEDZIDZO YEUNITED STATES
MaAmerican aive shasha dzekushandiswa kwedata
• 73% yedata yakadyiwa nevaAmerica yakashandiswa kunze kwenyika.
Europe ndiyo yaive nzvimbo yepamusoro yekushanya kwevanhu vekuAmerica muzhizha rino
• 55% yedata yakadyiwa nevaAmerica vachinyorera kuchirongwa che data chakaitwa muEurope, vachiratidza chido chavo chenzvimbo iyi.
• Pakati penyika dzeEurope dzakashanyirwa, United States inonyanya kufarira France, ine 21% yehuwandu hwavo hwekushandisa data munyika ino muzhizha.
• Vashanyi vekuAmerica vakaendawo kune dzimwe nzvimbo dzekuEurope dzakadai seSpain (6%), Greece (6%), Great Britain (6%), neItaly (5%).
Kwakakosha munyika yose kushandiswa kweSIM zvakare
• Nepo vanhu vekuAmerica vainyanya kushandisa eSIM yavo kune dzimwe nyika, vakashandisa zvirongwa zve data zvakare kufamba mukati meUnited States kwe27% yehuwandu hwavo hwekushandisa data panguva iyoyo.